Trend Izinyathelo Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Trend Izinyathelo Forex Ukuhweba Isu
Abahwebi bavame ukubanjwa enkingeni lapho bethulwa ngohlelo lohwebo. Abahwebi ngokuvamile bazofuna ukuthatha uhwebo ngamathuba aphezulu. Yingakho bengakhetha ukulinda izimpawu ezicacile, noma ngabe isenzo senani, isignali yenkomba noma yini. Noma kunjalo, ukulinda amasiginali acace kakhudlwana noma iziqinisekiso ngokuvamile kuzoholela ekungeneni kuthrendi sekwephuze kakhulu. Lokhu kuvame ukuphumela ekusethweni kwezohwebo ngenani eliphansi lomvuzo wengcuphe noma ukusetha okusekupheleni komfutho noma ithrendi yakho.. Abahwebi bagcina benesivuno esincane uma kuqhathaniswa nokulahlekelwa, noma uhwebo oluhlehla ngokushesha ngemva kokwenziwa kohwebo.
Abahwebi bangase basheshe kakhulu ekusetheni ukuguqulwa kwethrendi baze bagcine sebethatha uhwebo olungaholeli ekubuyiseleni emuva., noma sekwephuzile kakhulu ukuthatha ukuhweba ukuthi bagcine sebengena kwezohwebo lapho lo mkhuba usuzophela. Abahwebi asebenesikhathi nokho benza ukulingana phakathi kwalokhu okubili. Bangena kwezohwebo lapho kunomkhuba ocacile, nokho bayakugwema ukujaha amanani nxazonke.
Kunezindlela eziningi zokuhweba ngemakethe ngenkathi ushaya ibhalansi phakathi kokuhweba nethrendi futhi ungajahe amanani nxazonke. Enye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu zokuhweba ngemakethe ethrendayo ngokusobala ngaphandle kokujaha umfutho iwukuhweba ngesikhathi sokubuyisela emuva. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bangene emakethe ngesaphulelo ngenkathi behweba nethrendi.
I-Trend Steps Forex Trading Strategy iyisu elandelayo ehweba ngethrendi yamaphakathi nethemu, kuyilapho ngesikhathi esifanayo uhweba ekubuyiselweni emuva okwenzeka kumkhuba wesikhathi esifushane.
Inkomba Yesiteshi Sofudu
1 Inkomba Yesiteshi Sofudu
2 Inkomba Imicibisholo
4.2 Kunconywe Forex MetaTrader 4 Ipulatifomu Yokuhweba
4.3 Ungalifaka kanjani i-Trend Steps Forex Trading Strategy?
Inkomba ye-Turtle Channel inkomba yethrendi elandelayo ehloselwe ukusiza abahwebi ukuthi babone inkambiso yamaphakathi nethemu.
Umqondo walesi nkomba umbono wokuthi inani lithathwa njengelihlehlile uma liphambana nendlela yamanje yethrendi ngebanga elithile ngokusekelwe ku-Average True Range. (ATR).
Ihlonza futhi ibonise isiqondiso sethrendi ngokuhlela imigqa ephambene nendawo yethrendi. Le migqa isekelwe ebangeni elimaphakathi lokunyakaza lentengo phakathi nesikhathi esithile kanye nomehluko walo ukusuka kokuphezulu noma phansi kwenkathi efanayo.. Uma intengo yeqa futhi ivala ngokumelene nemigqa ehleliwe, inkomba izobona ukuguqulwa kwethrendi futhi isuse imigqa iye kolunye uhlangothi lwesenzo senani.
Ihlela imigqa emibili, umugqa oqinile kanye nomugqa onedeshi. Umugqa wedeshi umelela ithrendi yesikhathi esifushane, kuyilapho umugqa oqinile umele inkambiso yesikhathi eside. Ulayini oqinile futhi ushintsha umbala noma nini lapho inkomba ithola ukuguqulwa kwethrendi.
Abahwebi bangasebenzisa le nkomba njengesihlungi senkomba yethrendi ngokugwema ukuhweba okuphambene nesiqondiso samanje. Abahwebi futhi bangayisebenzisa njengesignali yokungena ebuyela emuva futhi bahwebe noma nini lapho umugqa oqinile ushintsha. Okokugcina, abathengisi bangasebenzisa le nkomba njengokulahleka kokumisa okulandelanayo ngokubeka ukulahleka kokumisa ngemuva kwanoma yimiphi imigqa emibili.
I-Indicator Arrows inkomba yesiginali yokuhlehla yethrendi esekelwe ekuhlanganeni kwezinkomba ezihlukahlukene. Isekela ukufunda kwayo isiqondiso sethrendi kuma-avareji anyakazayo, Ukuhambisa Isilinganiso Kuhlangana kanye kwehlukana (MACD), I-oscillator ye-Moving Averages (lesishiyagalombili), Ama-oscillator we-Stochastic, Inkomba Yamandla Ahlobene (I-RSI), Lezimpahla Channel Index (I-CCI), Isihlobo Ubungqabavu Bobusha Index (RVI), kanye ne-Average Directional Movement Index (I-ADX).
Njengoba le nkomba isekelwe ekuhlanganeni kwezinkomba ezihlukahlukene, izimpawu zokuhlehla okuwumphumela zivame ukwethembeka kakhulu. Amasignali ngokuvamile avela eduze nendawo ephakeme noma umkhombe wokujikela phezulu noma ukushwibeka phansi, kuyilapho ungasheshi ukusabela ngokweqile ekushintshashintsheni kwentengo.
Imicibisholo Yenkomba ibonisa ukuhlehla kwethrendi ngokuhlela imicibisholo ekhomba isiqondiso sethrendi. Abahwebi bangasebenzisa le micibisholo njengesignali yokungena noma ukuphuma ekuhwebeni okusekelwe kumkhuba wesikhathi esifushane.
Leli su lokuhweba lihweba ezimakethe ezithrendayo ezicacile ngokusekelwe kumkhuba wamaphakathi nethemu, ngenkathi uthatha okufakiwe okunembayo okususelwe kumkhuba wesikhathi esifushane.
Inkomba ye-Turtle Channel izosetshenziswa njengesisekelo sethrendi yamaphakathi nethemu. Amathrendi asekelwe nje lapho imigqa ye-Turtle Channel yakhiwe ngokuhlobene nesenzo samanje senani. Isenzo senani kumele futhi siqinisekise ithrendi ngokususelwe ekutheni ama-swing highs kanye nokwehla kwama-swing akheka kanjani.
Ngokushesha lapho umkhuba uqinisekiswa, singabe sesilinda ukuhlehla kanye nesiginali yokungena kumfutho wesikhathi esifushane. Lokhu kusekelwe emicibisholo yesignali yokungena ehlelwe Imicibisholo Yenkomba. Izimpawu zohwebo zithathwa kuphela uma i-Indicator Arrows ihambisana nethrendi ekhonjiswa inkomba ye-Turtle Channel..
The Turtle Ukuhweba Channel
Imigqa eqinile nedeshi yesikhombi se-Turtle Channel kufanele ifakwe ngaphansi kwesenzo senani.
Isenzo sentengo kufanele ngabe senza ama-swing highs aphezulu kanye ne-swing lows.
Faka i-oda lokuthenga ngokushesha lapho Inkomba Yemicibisholo iklama umcibisholo obheke phezulu.
Setha ukulahleka kokuma ngaphansi komugqa odeyishiwe wesikhombi se-Turtle Channel.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho i-Indicator Arrows iceba umcibisholo obheke phansi.
Imigqa eqinile nedeshi yesibonisi se-Turtle Channel kufanele ifakwe ngaphezu kwesenzo senani.
Isenzo sentengo kufanele ngabe senza ama-swing highs aphansi kanye ne-swing lows.
Faka i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho i-Indicator Arrows iklama umcibisholo obheke phansi.
Setha ukulahleka kokuma ngenhla komugqa onedeshi yesibonisi se-Turtle Channel.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho i-Indicator Arrows iceba umcibisholo obheke phezulu.
Lelisu lokuhweba liwumkhuba omuhle wokulandela isu uma lisetshenziswa emakethe lapho kunomkhuba ocacile. Inani ngokuvamile lizodala ukulandelela okuncane ngaphambi kokuphusha liqonde kuthrendi izikhathi eziningi uma ithrendi isungulwa.
Kuzoba nezikhathi lapho ukuphusha kwentengo bekungeke kube namandla kangako. Kuzophinde kube nezikhathi lapho ukubuyiselwa emuva okwenzeka ngemuva kokusethwa kohwebo kuzojula kakhulu. Lezi zimo azilungile ekuhwebeni kwethu, kodwa kuyenzeka emakethe ethrendayo. Ukuze ugweme ukulahlekelwa ngaphansi kwezimo ezinjalo, abadayisi bangasetha i-fixed take profit target esekelwe ezingozini eziningi ezibekwe ekulahlekelweni kokuyeka. Abahwebi bangase balinde ukulahlekelwa kokuyeka noma inzuzo yokuthatha ukuze ishayiswe. Imvamisa kuba yi-take profit target engashaywa kuqala uma okuhlosiwe kusasenengqondo futhi uma imakethe ithrenda ngempela.
I-Trend Steps Forex Trading Strategy iyinhlanganisela ye-Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Trend Izinyathelo Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Ungalifaka kanjani i-Trend Steps Forex Trading Strategy?
Landa Izinyathelo Ezithrendayo Zokuhweba Nge-Forex Strategy.zip
Hamba kwesokudla ukuze ukhethe Izinyathelo Zethrendi Forex Ukuhweba Isu
Uzobona Trend Izinyathelo Forex Trading Strategy iyatholakala kwi Ishadi lakho
Isiqephu esedluleExp Spearman Rank Correlation Histogram Time Week Period MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoI-VHF EA MT5 Inkomba
Usoho Ichi High Low Forex Ukuhweba Isu